အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမျိုးကြွယ် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - Yangon Media Group
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမျိုးကြွယ် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
”ဖြစ်ချင်တာတွေကိုချည်းပဲ အသေဆုပ်ကိုင် မဆွေးနွေးကြပါနဲ့။ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ??
ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားကြီး တစ်ခုလုံးက ခြစားမှုနဲ့ ယဉ်ပါးပြီးတော့ ခြစားမှုက ယဉ်ကျေးမှုလိုဖြစ်နေတဲ
စက်သုံးဆီဈေးက ဒေါ်လာဈေးနဲ့ တိုက်ရိုက်တော့ အချိုးကျတယ် ဒေါ်လာဈေး တစ်ခုတည်း အပေါ်မှာတော့ မူ??
”အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး မလာကြတာ?
အထက်တန်း Level လောက်မှာ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေပါအောင် KG+12 လုပ်နေတယ်
ယနေ့အချိန်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက် ဘက်ပေါင်း စုံမှ ဆောင်ရွက်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင် နိုင်ငံတကာ နှင့်ပူးပေါင်းကာ တက္ကသိုလ်များ တိုးတက်ရေးအတွက် အင်တိုက် အားတိုက် ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေသည့်အတွက် တက္ကသိုလ်သင်ရိုး များ ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဖြစ်သည့် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မျိုးကြွယ်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မေးမြန်းထားသည်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ဆရာတို့ ပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်နဲ့ British Council တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် အနေနဲ့ British Council ကနေ ကူညီပေးတဲ့ စီမံကိန်းမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါပါတယ်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ တွဲပြီးတော့ပေါ့။ အဓိက,က တော့ Higher Education ပေါ့။ အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သူများ နိုင်ငံနည်းတူ ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာဆို ကြပါစို့။ တက္ကသိုလ်တွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရအောင်၊ ရဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က Step by step သွားဖို့လိုတယ်။ မသွားလို့လည်း မရ တော့ဘူး။ နောက်တစ်ခါ သုတေသနကိစ္စပေါ့။ သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ သုတေသန မလုပ်နိုင် တာ။ သုတေသနမလုပ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ကို ကျွန်တော်တို့ အဖြေရှာရမယ်။ နောက် Administration တို့ကိုလည်း Change မှ ရမယ်။ သဘာဝအတိုင်း ဘာသာရပ်တွေ၊ ဥပမာ- ရုက္ခဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ သင်္ချာ ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသွားမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တကယ့် အသုံးချတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ need assessment နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကျွန်တော် Survey လေး လည်း လုပ်နေပါတယ်။ နောက်သုံးနှစ်ကို ဆက်ပြီးတော့ ပရောဂျက်ကို In Powering High Education System in Myanmar ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ NEPC အနေနဲ့လည်း Building ကို Different Partner တွေ JICA တို့ UK တို့ ကောင်း နေပြီ။ ဒါက တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ နောက် ထပ် သုံးနှစ်လုပ်ဖို့ ရှိပါသေးတယ်။ ၂ဝ၂၁ အထိအောင် British Council က ဆက်ပေး ပါမယ်။ ပေးတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ့၊ ဥပမာ သူတို့က အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်သွားတယ်။ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း လုပ်သွားတယ်။ ဒါလေးပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘာလိုမတုန်းဆိုတော့ ရာထူး တိုးတဲ့စနစ်တွေ၊ သုတေသနလုပ်တဲ့စနစ်တွေ က ဘယ်လောက်အထိအောင်၊ ဘယ်လိုဘာ သာရပ်တွေက သုတေသနလုပ်ရမလဲ၊ ဒီနိုင်ငံ အတွက် ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေ အရေးကြီး မလဲ။ ရှင်းပြရရင် Food Science၊ အစား အသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Offer လုပ်နိုင်တဲ့ ဘွဲ့ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ် မရှိသေးဘူး။ အခုမှစတာ၊ ဒါက ဥပမာပြောတာ။ နောက် ကျွန်တော်က စိုက် ပျိုးရေးက လာတာ၊ စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်တွေ အများကြီးရှိ တယ်။ သို့သော် စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာကို တစ်ကျောင်းမှ Offer မလုပ်နိုင်ဘူး။ စက်မှု လယ်ယာကို သွားတော့မယ်။ ကျေးလက်ဒေသ က လူ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ တောင်သူ တွေ ဖြစ်တယ်။ နောက် Hotel and Tourism ၊ အများကြီးလုပ်ရမှာနော်။ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ။ နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ ဘာသာတွေကို ကျွန် တော်တို့က ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်မှာပါ။ သုံးနှစ်ပရောဂျက်က ဒါတွေဆောင်ရွက်မှာ ပါ။ ၁၁ကျောင်းကတော့ Pilot အနေနဲ့ Project လုပ်ရမယ်။ တက္ကသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ အားနည်းချက်တွေ၊ အားသာချက်တွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ သင်ကြားရေး၊ သုတေသနရှိမယ်။ အခုတစ်ခါနဲ့ဆို Training လေးတွေပေးနေတာ သုံးခါရှိပြီ။ ပြီးတော့ မှ တက္ကသိုလ် ၁ဝဝ ထဲမှာ ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်မှာပေါ့။ ဒါ British ရဲ့ Idea aပါ့။
ဆရာပြောထားတဲ့ Research ကို ဘယ်တော့လုပ်မှာလဲ။
ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာ US ကလည်း လာကူလိမ့်မယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကော် မရှင်က တွဲလုပ်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကို လို အပ်ချက်ကလေးလည်း တင်မယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံရဲ့ ဘွဲ့ရအရေအတွက်နဲ့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ ဘွဲ့ရအရေအတွက်က ဘယ်လိုများနေတုန်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ဘွဲ့ရတွေက ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံ မှာမှ မရှိဘူး။ Professional တွ ဖြစ်တဲ့ Education၊ Engineering၊ Sale၊ ကျန်းမာ ရေး အကုန်လုံးကနည်းတယ်။ နောက် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ။ GTI လိုဟာမျိုးပေါ့။ ဒီကျောင်းတွေကလည်း နည်းတယ်။ သူများ နိုင်ငံတွေမှာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းကို သွားတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အဲဒီကျောင်းတွေကို တိုးတက်ပြီးဆက် ဖွင့်ဖို့ အခုတော့ လုပ်နေပါပြီ။ အထည်ချုပ် သင်တန်းတွေ၊ ဆံပင်ညှပ်တာ။ ကျွန်တော် US မှာ တွေ့ခဲ့တာ ကျွန်မ ဘွဲ့ရစရာမလိုဘူး တဲ့။ ဆံပင်ညှပ်တာရရင် လိုင်စင်ရပြီတဲ့။ အလုပ် လုပ်စားလို့ရပြီ။
KG+12 ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ဒီစီမံကိန်း ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။
KG+12 က တကယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာမှာက ၁၂ တန်း ဖြစ်နေပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာ တက္ကသိုလ်ရောက် ပြီဆိုတာ ၁၈နှစ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဦး နှောက်က တွေးခေါ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေက ၁၆နှစ်ဆိုတာ အရမ်းငယ် တယ်။ အဲဒီလိုပုံစံမျိုးရောက်အောင် အထက် တန်း Level လောက်မှာ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပါအောင် KG+12 လုပ်နေ တယ်။ အဲဒီပြီးတဲ့အချိန်မှာ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်နေတဲ့ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းကို နည်းနည်းလေး Adjust လုပ်မယ်။ ၂ဝ၂၁ လောက်မှ KG+12 ကပြီးမှာ။
တက္ကသိုလ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ဘယ်လို Adjust လုပ်မလဲ သိပါရစေ။
သင်ရိုးညွှန်တမ်းတွေကတော့ နိုင်ငံတကာပဲ။ တက္ကသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ့။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှာရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ၊ အခု British Council ကူညီနေတဲ့ အင်္ဂလိပ် စာ ဆိုပါတော့။ ဒါကို နိုင်ငံတကာနဲ့။ ရန် ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆို Engineering ပေါ့။ သူတို့မှာလည်း Engineering Council တို့ ဘာတို့ ရှိတယ်။ အာဆီယံမှာရှိတဲ့ Engineering သင်တဲ့ တက္ကသိုလ်နဲ့ တန်းထိုး ပြီးတော့ ဒါညီညွတ်အောင် လုပ်ရမယ်။ သင် ရိုးညွှန်းတမ်း ပြောင်းလိုက်ရင်။ အတွေးအခေါ် ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကျူရှင်စနစ်ပေါ့။ စင်ကာပူ မှာလည်း ကျူရှင်ဆိုတာတော့ ရှိတယ်။ သို့ သော် ကျူရှင်သင်တဲ့ဆရာသည် Separate ပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းနည်းရောနေတာ ပေါ့လေ။ ဒါမျိုးကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တိုးတက် အောင် လုပ်မလဲ။ အခု Autonomy လုပ် မယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လာကြတော့မယ်။ သာမန်ပါမောက္ခနဲ့တော့ မတူဘူး။ သို့သော် သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဘာလုပ်မလဲ။ တကယ့် Outstanding ဖြစ်သလား။ ထဲထဲဝင်ဝင် သု တေသနတွေ နိုင်ငံတကာအထိအောင် ဖောက် နိုင်သလား။ ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။ နောက် ကလေးတွေကိုလည်း Attitude ပြောင်းရမယ်။ စာကြည့်တိုက်မသွားကြဘူး။ ဘာလို့မသွားကြ လဲ။ နိုင်ငံတကာမှာ Facebook တို့ ဘာတို့ ရှိနေတာပဲ၊ သို့သော် စာကြည့်တိုက်သွားကြ တယ်။ နောက် Student Union ဆိုတာပေါ့။ နိုင်ငံတကာမှာက Student Union ဆိုတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တက္ကသိုလ်ရဲ့ အာ ဏာပိုင်တွေ Supported တွေ၊ ဒါ ကျွန်တော့် အမြင် ပြောတာပါ။ ဒီမှာက နည်းနည်းလေး Against လုပ်နေတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် ကျွန်တော် တို့က ရှေ့သွားလို့မရတော့ဘူးလေ။ နောက် ပြန်ဆုတ်သလို ဖြစ်တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရတဲ့ဘွဲ့နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွဲလွဲ တာတွေ များနေတာကျတော့ရော။
ဒါလည်းပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု လည်း လိုတယ်။ ဘွဲ့ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ပေါ့။ ဘယ်အလုပ်တွေက နိုင်ငံ့အတွက် လို အပ်နေတုန်းပေါ့။ ဥပမာဆိုကြပါစို့ ကျောက် မျက်နဲ့ပတ်သက်လို့ မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် လိုဟာမျိုးဟာ ကျောက်မျက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာကို ဒါကြီးလုပ်ပြီးတော့ အဲဒီမှာ သုတေ သနလုပ်မယ်ဆိုရင် အများကြီး အကျိုးရှိတာ ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သနပ်ခါးထွက် တယ်။ သနပ်ခါးကို မိတ်ကပ်လုပ်ပြီးတော့ သူ များနိုင်ငံတွေ အတုအပမလုပ်အောင် ပခုက္ကူ လို တက္ကသိုလ်မျိုး၊ မုံရွာလိုတက္ကသိုလ်မျိုးမှာ သနပ်ခါးကို ဘယ်ဌာနက လုပ်မလဲ။ ရုက္ခဗေဒ က လုပ်မလား၊ သစ်တောက လုပ်မလား။ ဥပမာ ပြောပြတာ။ ကော်ဖီ။ ကျွန်တော်တို့ ကော်ဖီက Export လုပ်တယ်။ မန္တလေးနား မှာ ရှိတယ်။ မန္တလေးနားမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ် တွေက လုပ်မှရမယ်။
NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကို NLD မကွေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမှုဖွင့်
'ခွဲထွက်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံရေးသံဝေဂ' တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ များစွာနားလည် တရားရကြဖို့
မီး အာမခံထားတဲ့အချိန်မှာ ရေကြီးရေလျှံဆိုတဲ့ အာမခံ အကာအကွယ်ယူထားမယ် ဆိုရင် ဒါကိုပါ ထည့်ပြီ??
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့် ပုဂ္ဂိုလ် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးနှင?
ညအချိန် ပြိုင်ကားဖြင့် တိုက်ခဲ့မိ၍ လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သော အမှု အောင်မြေသာစံမြို့နယ် တရားရုံ
စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင်နေသည့် ကွန်တိန်နာ ယာဉ်များကို ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်
မြသလွန်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ (၂၅၈၁)ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓပူဇနိယဘုရားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
မြန်မာ့ အခေါက်ရွှေ ကျပ်ကိုးသိန်းအထက် အမြင့်ဈးဖြင့်တည်ငြိမ်နေ၊ မိုးရာသီနှင့်အတူ အရောင်း အဝ
ခိုင်းကောင်းသည့် နွားဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူသိအောင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ကြိုးစားပြမည်ဟု ပါတီပြောေ?